Ibhlog kaOlga Steshkina Ibhlog kaOlga Steshkina
Ibhlog kaOlga Steshkina
Kutheni ufuna i-ganache? Kutheni ufuna i-ganache? 2021-10-23 19:00:04	Ukunikezelwa kwamandla UOlga Sologub Kutheni uzinzisa i-ganache? Ukuba i-ganache ene-stratified ivunyelwe ukuba izinzile, ngoko ayiyi kuba ne-texture egudileyo, kodwa i-grainy ngenxa yokungasasazwa ngokwaneleyo kwamafutha (amasuntswana amanqatha kakhulu ... Funda
Impendulo ekhawulezayo: Ngaba kufuneka ndikhuphe ulwelo xa ndigalela intlanzi ebomvu? Impendulo ekhawulezayo: Ngaba kufuneka ndikhuphe ulwelo xa ndigalela intlanzi ebomvu? 2021-10-23 19:00:04	Ukunikezelwa kwamandla UOlga Sologub Ngaba kufuneka ndikhuphe ulwelo xa ndigalela intlanzi? Yintoni ebalulekileyo ukuyikhumbula: xa intlanzi igalelwe ityuwa, ijusi ikhutshwa rhoqo (lo ngumxube wetyuwa kunye nolwelo oluphuma kwintlanzi), kwaye ... Funda
Eyona mpendulo ingcono: Zingaphi izidanga ezithathayo ukuqhotsa iqanda? Eyona mpendulo ingcono: Zingaphi izidanga ezithathayo ukuqhotsa iqanda? 2021-10-23 19:00:04	Ukunikezelwa kwamandla UOlga Sologub Kufuneka uqhotse amaqanda ixesha elingakanani? Thela amaqanda epanini evuthayo (gcina iplate isondele kumphezulu wepani). Fry amaqanda ngomzuzu we-1 ngokushisa okuphezulu. Emva koko umlilo ... Funda
Ngaba kufuneka ndifake amaqanda kwisonka? Ngaba kufuneka ndifake amaqanda kwisonka? 2021-10-23 19:00:04	Ukunikezelwa kwamandla UOlga Sologub Asenzelwa ntoni amaqanda akwintlama yegwele? Amaqanda ongezwa ukutyebisa intlama ngeeprotheni kunye neevithamini; iimpahla ezibhakiweyo zimnandi kwaye zinempilo. Ukuze iipayi kunye neebhondi zingabi ... Funda
Umbuzo: Kufuneka uyibhake nini iPasika ngo-2021? Umbuzo: Kufuneka uyibhake nini iPasika ngo-2021? 2021-10-23 19:00:04	Ukunikezelwa kwamandla UOlga Sologub Kufuneka uyibhake nini iPasika? Ngokwesiko, kuyisiko ukubhaka i-paschi ngoLwesithathu, uLwesine oMaundy nangoMgqibelo. Ukuba iikeyiki ze-Ista ezibhakwe ngoLwesithathu ziyakwazi ukuphulukana nokutsha ngeholide ... Funda
Kutheni kufuneka uvavanyo luvele kabini? Kutheni kufuneka uvavanyo luvele kabini? 2021-10-23 19:00:04	Ukunikezelwa kwamandla UOlga Sologub Mangaphi amaxesha apho intlama yegwele inokucolwa? Ngexesha lokuvutshelwa kwegwele inhlama, kufuneka icolwe ubuncinane kanye. Ukuxova intlama kufeza iinjongo ezininzi. Okokuqala, basusa ... Funda
Iindlela zokupheka ezilungileyo
Iimbambo zeengulube ezibiweyo
Ndiyabulisa, ziingcali zam ezithandwayo zokupheka. Ngaba uyazithanda iimbambo ezihlanjwe ngokufanelekileyo kunye negriliweyo okanye ukubhaka ehovini? Inye kuphela ... Funda
Ungazipheka njani iimbambo zehagu eyosiweyo kwi-teriyaki marinade-inyathelo ngenyathelo ngenyathelo kunye nefoto 2017-11-13 12:07:25 Recipes
I-omelet kwi-pastry ye-puff ehovini Indlela yokupheka i-omelet yoqobo kwi-puff pastry e-ontini kwisidlo sakusasa-inyathelo ngenyathelo leresiphi 2017-09-28 11:53:16 Recipes
Imibuliso, iigourmets zam ezintle. Khawundixelele, uyakuthanda ukutya ekulula ukwenziwa? Ndinothando olunjalo lokupheka ngokukhawuleza kwabonakala xa unyana wam eqala ukuhamba. Funda
Amathanga enkukhu ngeorenji kunye nemon Upheka njani amathanga enkukhu ngeorenji kunye nemon ehovini- inyathelo ngenyathelo lesinyathelo kunye nefoto 2017-09-15 12:08:35 Recipes
Imibuliso, abathanda izinto ezimnandi nezimnandi. Ndicinga ukuba awuyi kuyiphika into yokuba intaka ihamba neziqhamo kunye namajikijolo. Ewe, umzekelo, isidlo sokutyikitya somthendeleko ... Funda
Indlela yokupheka i-ratatouille ngokufanelekileyo Indlela yokupheka i-ratatouille ngokuchanekileyo-iresiphi yenyathelo ngenyathelo ngenyathelo kunye neefoto zokunkcenkceshela umlomo 2017-09-11 11:57:48 Recipes
Molweni bapheki bam abathandekayo. Kutshanje ndibukele ikhathuni "Ratatouille". Ibali elilungileyo lokuba nantoni na oyifunayo inokwenzeka ukuba awunikezeli. Yiba nephupha -… Funda
Potato casserole kunye netshizi Ukupheka i-casserole yamazambane kunye nesonka samasi-inyathelo ngenyathelo lesinyathelo kunye nefoto 2017-09-04 12:01:10 Recipes
Ndiyabulisa, ziingcali zam ezithandwayo zokupheka. Ndiqaphele ukuba uninzi lwabahlobo bam banxibelelanisa i-casserole kunye ne-curd pie. Mhlawumbi kungenxa yokuba i-cottage cheese casseroles itshone emphefumlweni, ethi ... Funda
Indlela yokwenza i-corn tortillas?
Iiresiphi ezingcono ze-carrot casserole
Uyikha njani imbila
Uyifry njani imilenze yenkukhu kamnandi
Indlela yokwenza i-fry yenkomo epanini
Ukutya okuThatywayo okungama-60 - imenyu yeveki
Indlela yokwehlisa ubunzima ekuvumela ukuba ungalambi. Ukutya thabatha 60 ...
Ukutya kukaDucan- Inqanaba lokuhlasela
Ukutya okuDumile kweDucan Attack - Iimveliso eziVunyelweyo kunye ...
Abadli bokutya abaziwayo ehlabathini
Abona bantu batya ukutya okuluhlaza abadumileyo kwihlabathi babelana ngemibono yabo ...
Ukutya kweDukan-amanqanaba kunye neemenyu
Yintoni intsingiselo yokutya kweDukan, ethi ...
Yintoni yokupheka kwi-blender?
Namhlanje ekhitshini ungafumana iqela lezixhobo eziluncedo.
Okungakumbi malunga nesondlo
Umbuzo: Kufuneka uyibhake nini iPasika ngo-2021? Umbuzo: Kufuneka uyibhake nini iPasika ngo-2021? 2021-10-23 19:00:04 Ukunikezelwa kwamandla UOlga Sologub Kufuneka uyibhake nini iPasika? Ngokwesiko, kuyisiko ukubhaka i-paschi ngoLwesithathu, uLwesine oMaundy nangoMgqibelo. Ukuba iikeyiki ze-Ista ezibhakwe ngoLwesithathu ziyakwazi ukuphulukana nokutsha ngeholide ... Funda
Umbuzo wakho: Indlela yokugcina i-sauce ye-balsamic? Umbuzo wakho: Indlela yokugcina i-sauce ye-balsamic? 2021-10-23 19:00:04 Ukunikezelwa kwamandla UOlga Sologub Indlela yokugcina ukhilimu we-balsamic? Gcina kumaqondo obushushu ukusuka -5'C ukuya + 30'C kunye nokufuma okuhambelana ne-75%. Gcina ibhotile efrijini emva kokuvula. Indlela yokugcina iviniga yebhalsamu ... Funda
Kutheni ufuna i-ganache? Kutheni ufuna i-ganache? 2021-10-23 19:00:04 Ukunikezelwa kwamandla UOlga Sologub Kutheni uzinzisa i-ganache? Ukuba i-ganache ene-stratified ivunyelwe ukuba izinzile, ngoko ayiyi kuba ne-texture egudileyo, kodwa i-grainy ngenxa yokungasasazwa ngokwaneleyo kwamafutha (amasuntswana amanqatha kakhulu ... Funda
Eyona mpendulo ingcono: Zingaphi izidanga ezithathayo ukuqhotsa iqanda? Eyona mpendulo ingcono: Zingaphi izidanga ezithathayo ukuqhotsa iqanda? 2021-10-23 19:00:04 Ukunikezelwa kwamandla UOlga Sologub Kufuneka uqhotse amaqanda ixesha elingakanani? Thela amaqanda epanini evuthayo (gcina iplate isondele kumphezulu wepani). Fry amaqanda ngomzuzu we-1 ngokushisa okuphezulu. Emva koko umlilo ... Funda
Kutheni kufuneka uvavanyo luvele kabini? Kutheni kufuneka uvavanyo luvele kabini? 2021-10-23 19:00:04 Ukunikezelwa kwamandla UOlga Sologub Mangaphi amaxesha apho intlama yegwele inokucolwa? Ngexesha lokuvutshelwa kwegwele inhlama, kufuneka icolwe ubuncinane kanye. Ukuxova intlama kufeza iinjongo ezininzi. Okokuqala, basusa ... Funda
Impendulo ekhawulezayo: Ngaba kufuneka ndikhuphe ulwelo xa ndigalela intlanzi ebomvu? Impendulo ekhawulezayo: Ngaba kufuneka ndikhuphe ulwelo xa ndigalela intlanzi ebomvu? 2021-10-23 19:00:04 Ukunikezelwa kwamandla UOlga Sologub Ngaba kufuneka ndikhuphe ulwelo xa ndigalela intlanzi? Yintoni ebalulekileyo ukuyikhumbula: xa intlanzi igalelwe ityuwa, ijusi ikhutshwa rhoqo (lo ngumxube wetyuwa kunye nolwelo oluphuma kwintlanzi), kwaye ... Funda
Okungakumbi malunga nokutya
Yonke into owakhe wafuna ukuyibuza malunga nokutya kweMaggi Konke oke wafuna ukubuza malunga nokutya kweMaggi- iimpendulo zeyona mibuzo ibuzwa rhoqo 2018-10-23 14:30:07 bakudle UOlga Sologub Ingqokelela yemibuzo ixhaphakileyo malunga nokuqonda kokutya kweMaggi. Kukangaphi ungayiphinda, yintoni ekufuneka uyenzile ukuba ubunzima buyekile, ukuba wenze ntoni ukuba urhulumente wophuliwe, loluphi ubungakanani besabelo, kufuneka wenze ntoni xa uqunjelwe. Imifuno neziqhamo ezivunyelweyo, ungawatshintsha njani amaqanda, luhlobo luni lweentlanzi oza kuzitya nokuba utywala newayini zinokusetyenziswa. Funda
Yintoni ukutya okukhuthaza ukunciphisa umzimba Kukuphi ukutya okuya kunceda ukukhawulezisa imetabolism, ukutshisa amanqatha kunye nokukhuthaza ukunciphisa umzimba? 2017-12-17 21:18:32 bakudle UOlga Sologub Ukuze ubunzima obugqithisileyo buhambe ngokukhawuleza, kufuneka utye ukutya okukhawulezisa imetabolism emzimbeni womntu. Zeziphi ezizakunceda koku? Unokufumana uluhlu lwezona zinto zibalaseleyo kweli nqaku. Iisuphu zeekhalori ezisezantsi, iisiriyeli kunye nemifuno zilungele ukunciphisa umzimba ngokukhawuleza. Kwakhona, imifuno njengeziqholo iyantlukanisa ukutya - batshisa amanqatha kwaye bakhuthaza ukwehla kobunzima, ngakumbi esiswini nasemacaleni. Funda
Ukunciphisa umzimba ngejinja ekhethiweyo Indlela yokunciphisa umzimba ngokufanelekileyo: ngaba ijinja ekhethiweyo ilungile ukunciphisa umzimba? 2017-11-01 11:59:14 bakudle UOlga Sologub Ngaba udiniwe kukulwa ubunzima obukhulu? Zama ijinja ekhethiweyo yokunciphisa umzimba. Kule nqaku, siqokelele iingcebiso eziluncedo malunga nendlela yokuthatha ijinja, zingaphi iigrama ngosuku, zingaphi ezilahliweyo, ukuba zisetyenziswe ngokuchanekileyo. Kananjalo iresiphi eluncedo yejinja ekhethiweyo ekhaya, izibonelelo kunye nokwenzakala kwemveliso. Funda
Yintoni oyifunayo ukuze unciphise umzimba Isondlo esifanelekileyo kunye nokuzilolonga ngoyena ndoqo wokuba mncinci. Ufuna ukutya ntoni ukuze unciphise umzimba? 2017-10-27 11:44:46 bakudle UOlga Sologub Ubunzima obugqithisileyo yingxaki ekudala ikho kuluntu lwanamhlanje. Ekulweni nayo, ukuzilolonga kunye nokubala kweekhalori kuza kunceda. Kweli nqaku, uya kufunda malunga nento oyifunayo ukuze unciphise umzimba, ukutya okhetha kona, kwaye ukuze ufumane iziphumo ezingcono kufuneka uzilolonge rhoqo, uhambe ngakumbi, kwaye ubaleke ngcono. Funda
Isidlo sakusasa sesibini sokunciphisa umzimba Ngaba "isidlo sakusasa sesibini" sisixhobo esiyimfihlo sokunciphisa umzimba? 2017-10-14 11:57:27 bakudle UOlga Sologub Abantu abaninzi bathi isidlo sakusasa esimnandi sisitshixo sosuku oluyimpumelelo. Nangona kunjalo, ayisiyiyo. Kungcono ukwahlula isidlo sakho sakusasa kwisiqingatha. Ngale ndlela ufumana ixabiso elingaphezulu. Funda
Yintoni egrogrisa ubunzima rhoqo Yeyiphi imingcipheko yokulinganisa rhoqo kunye nendlela yokufumana rhoqo okufanelekileyo 2017-10-12 11:58:59 bakudle UOlga Sologub Abantu abaninzi babukela ubunzima babo. Kodwa abanye abantu bayithanda kakhulu le nto. Uyifumana njani intsingiselo yegolide? Kulula kakhulu ukufumana ujonge kwisikali Funda
Okungakumbi malunga nobuncinci
Ukuzivocavoca kweKegel kwabasetyhini Uyenza njani ngokufanelekileyo imithambo yeKegel yabasetyhini ekhaya? 2018-04-02 11:56:23 Ukuthoba UOlga Sologub Ukuzivocavoca okanye ukuzilolonga kwilungu lobufazi kukuvuyisa kakhulu ekusebenzeni. Ukusuka kwinqaku uya kufunda ukuba yintoni, ubuchule bokwenza i-gymnastics ngokuchanekileyo kubafazi ekhaya, ngaba kukho naziphi na izichaso ze-hemorrhoids kunye ne-cystitis, kunokwenzeka ukuba uyenze ngexesha lokuya esikhathini. Kunye neseti yenyathelo ngenyathelo yeseti yezifundo zabaqalayo kunye nokuzilolonga ngeebhola. Funda
Ukuzivocavoca kukaKegel kwabasetyhini abakhulelweyo Uyenza njani ngokufanelekileyo imithambo yeKegel yabasetyhini abakhulelweyo kwaye ngaba kukho naziphi na izinto ezichaseneyo nabo? 2018-03-30 11:56:22 Ukuthoba UOlga Sologub Ukuzilolonga okubandakanya imithambo kaKegel kuluncedo kubafazi abakhulelweyo ukuya kuthi ga kwiiveki ezingama-40. Kungcono ukuqala ukwenza imithambo kwitrimester yokuqala, kodwa izibonelelo ziya kubonakala kwi-1 neye-2. Kwinqaku uza kufumana ulwazi malunga nendlela yokwenza imithambo ekhaya, uphononongo kunye nezimo. Funda
I-Gymnastics yeBhola kaKegel I-gymnastics esondeleyo kunye neebhola zeKegel: yintoni kunye nendlela yokuyisebenzisa ngokuchanekileyo 2018-03-28 12:14:18 Ukuthoba UOlga Sologub Ukomeleza izihlunu zangasese kubasetyhini kunokwenzeka nakwikhaya. Kule nto ufuna amaqanda okanye iibhola zeKegel. Ungayisebenzisa njani le simulator? Masifumanise ukuba ziyintoni na, ziyintoni kwaye ziyenziwa njani imithambo. Kule nqaku, uya kufumana imiyalelo yokusebenzisa iibhola, iingcebiso malunga nendlela yokukhetha ubungakanani babaqalayo, indlela yokufaka kunye nendlela abasebenza ngayo. Funda
Ukuphefumla umzimba Imizuzu eyi-15 ngosuku yomzimba omncinci-wokuphefumla wokunciphisa isisu 2018-03-09 11:58:03 Ukuthoba UOlga Sologub Ukwenza umthambo kangangemizuzu eli-15 ngosuku kunokukhokelela kwiziphumo ezilungileyo. Kwanele ukwenza umthambo wokuphefumla ukunciphisa umzimba esiswini. Yintoni? Kwinqaku uza kufumana inkcazo yomzimba kaMarina Korpan, umthambo kaStrelnikova, ijianfei yabaqalayo kunye neeklasi ngokwenkqubo yaseJapan. Unokufunda kwakhona kwaye ubukele ividiyo ebonisa iziseko zokuzilolonga kwimizuzu esi-8 nje. Funda
Ukuzilolonga kweBelly Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yeyiphi imithambo yomzimba yokunciphisa umzimba esiswini, emacaleni nasezinqeni zezona zilungileyo? 2018-03-07 11:58:05 Ukuthoba UOlga Sologub Ukuzivocavoca kungenziwa kuphela kwindawo yokuzivocavoca, kodwa nasekhaya, uhleli esitulweni. Kule nqaku, ukusebenza ngokufanelekileyo kwamadoda nabasetyhini kukhethwe-kwi-fitball, ukuphefumla okunzima komzimba, ibha emileyo kunye nabanye. Ukuzivocavoca kwe-Dumbbell yokunciphisa isisu kunye namacala, iinyonga, iimpundu neengalo. Funda
Yintoni oomatshini bakaKegel? Yintoni abaqeqeshi be-Kegel yelungu lobufazi? Umgaqo wokusebenza kunye nemiyalelo yokusebenzisa 2018-03-06 11:56:56 Ukuthoba UOlga Sologub Kubafazi, ukomeleza izihlunu ze-pelvic kunokwenzeka ngoncedo lwee-simulators zikaKegel. Yintoni, indlela yokusebenzisa iibhola kwaye ngaba kukho naziphi na izimo ezichaseneyo - funda kweli nqaku. Kunye nokuphononongwa ngoogqirha, ukuba ungayikhetha njani kwaye ungayithenga phi le massager, kunokwenzeka ukuba uyenze ngokwakho ekhaya kunye nenkcazo yeemodeli ezithandwayo kakhulu - iMagic Kegel Master kunye neKGoal. Funda
Yintoni i-primer yobuso Ubuso bokuqala: yintoni kunye nendlela yokuyisebenzisa + nenqanaba leemveliso ezilungileyo 2019-01-24 15:59:02 Красота UOlga Sologub Mva kwemini, bafundi bebhlog abathandekayo! Ngaba uyazi ukuba yintoni into yokuqala ubuso? Abo balandela iingcebiso zegcisa lobugcisa kudala befaka le mveliso kwingxowa yabo yezithambiso. Kwaye hayi ... Funda
Izibonelelo ze-hyaluronic acid ebusweni Ziziphi izibonelelo ze-hyaluronic acid ebusweni: ukusetyenziswa kwi-cosmetology nasekhaya 2018-08-29 09:21:57 Красота UOlga Sologub Yintoni hyaluronic acid ebusweni? Masifumanise ukuba kutheni iifilitha ezisekwe kwi-hyaluronic zifuneka, ukusebenzisa ikrimu kunye neserum ekhaya, ukusetyenziswa kweinaliti, i-mesotherapy kunye ne-biorevitalization yemibimbi, imilebe kunye nokusonga kwe-nasolabial kwi-cosmetology. Ukungqinelana ngexesha lokukhulelwa kwaye kunokwenzeka ukuba ubambe ehlotyeni. Ukuphonononga inkqubo kunye neefoto ngaphambi nasemva. Funda
Yintoni unyango lwe-ozone ebusweni Luthini unyango lwe-ozone ebusweni kwaye lubiza malini ikhosi yonyango lolusu? 2018-08-24 14:21:54 Красота UOlga Sologub Iziphumo eziluncedo ze-ozone kulusu kudala zisetyenziswa kwi-cosmetology. Kweli nqaku uza kufunda ukuba luyintoni na unyango lwe-ozone kubuso obunefoto ngaphambi nasemva kwayo, amaxabiso ayo, ukuba inceda njani kunyango lwe-acne, i-acne, i-rosacea, kunye ne-oval yobuso nentamo. Yintoni Izimo, iziphumo kunye neengxaki. Ngaba kunokwenzeka ukuba uyisebenzise ekhaya kwaye ngexa lokukhulelwa, yimalini inkqubo yeenkqubo? Funda
Bronzer ebusweni nasemzimbeni Yintoni ibronzer yobuso kunye nomzimba: yintoni kunye neskimu ngenyathelo ngenyathelo kwisicelo sayo 2018-08-20 14:05:12 Красота UOlga Sologub Ulusu olukhanyayo liphupha ngalinye lentombazana. Kule nqaku uza kufunda ukuba yintoni ibronzer yobuso kunye nomzimba, yeyantoni, umzobo wenyathelo ngenyathelo kwimifanekiso yendlela yokufaka kunye nokuyisebenzisa ngokuchanekileyo kunye nokuqaqamba, ukuba ungayikhetha njani imveliso yesikhumba esikhanyayo , yeyiphi engcono ekuthengeni - umgubo okanye ulwelo, uphononongo kunye neefoto ngaphambi nasemva malunga neempawu zikaClarence, Mac, Dior, Letual kunye nabanye. Funda
Kuthetha ukunciphisa pores Ukuphononongwa kwezithambiso ezilungileyo kunye namayeza abantu ukunciphisa pores ebusweni 2018-04-01 12:17:03 Красота UOlga Sologub Xa ukhetha iyeza elifanelekileyo lokunciphisa ii-pores ebusweni, kuya kufuneka wazi ukuba unokuthenga amayeza asebenzayo okanye ulungiselele imaski elungileyo ekhaya. Ingaba yikhrimu, udongwe lokuthambisa okanye iimaski ezineasprini, iitapile kunye nemon, okanye ubusi. Funda ngakumbi kwinqaku, apho unokufumana kwakhona uphononongo kunye namaxabiso ezinto zokuthambisa. Funda
Yintoni ubuso bokuqaqamba Yintoni ubuso obuqaqambileyo kunye nendlela yokuyisebenzisa: ukufunda indlela yokukhetha umbala kwaye uwusebenzise ngokuchanekileyo 2018-03-31 12:18:51 Красота UOlga Sologub Awunakufumana i-makeup egqibeleleyo ngaphandle kwesiqaqambisi. Masifumanise ukuba yintoni kwaye siyisebenzisa ngokuchanekileyo! Kwinqaku uza kufumana inyathelo ngenyathelo ngenyathelo malunga nendlela yokwenza isicelo kubuso obujikelezileyo, uphononongo lokuba yeyiphi engcono ekuthengeni kwivenkile ekwi-intanethi, amaxabiso kunye nokuhlelwa kwezinto eziphambili eziqaqambileyo, iifoto ngaphambi nasemva kwesicelo, iingcebiso malunga indlela yokukhetha umthunzi oyifunayo. Funda
Molo, igama lam ndinguOlga. Ngaba ujonge iiresiphi ezisempilweni zobuhle kunye nezempilo? Emva koko wamkelekile kwiblogi yam. Okungakumbi ngam
© 1983-2020 Ibhlog kaOlga Steshkina Ukukopa umbandela kuyakhuthazwa kuphela ukuba kukho ikhonkco elisebenzayo ilukioki.life
Guqula useto lwangasese